Baraingo hatreto ny anton’ny fahamaizana. Niainga avy any amin’ny rihana faharoa ambony ny afo.
« Manao izay ho afany ny mpamonjy voina mamono ny afo. Sarotra dia sarotra fa misy rivotra vao maika mampirehitra ny afo », hoy ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, Raharinirina Baomiavotse Vahinala. Efa eo an-toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana, hisorohana izay mety ho fanararaotana.
Efa nahazo fampandrenesana tamin’ny alalan’ny « mail » ny mpiasa tao amin’ny ONE, andro vitsy lasa izay mba tsy hisy hiakatra hamonjy ny toeram-piasana taorian’ny fisian’ny mpiasa tao voamarina fa voan’ny Covid-19.
Mifanila amin’ny Paierie Général na Trésor Antaninarenina sy ny biraon’ny Paositra misy ny ministeran’ny Paositra sy fifandraisandavitra ary ny fampiroboroboana ny Nomerika ity tranon’ny ONE may ity.